imoto absorber - Damping eyinhloko isici. Kuyadingeka ukuba ngokuqhubekayo silondoloze isimo yokusebenza unit. Phela, akabangeli nje kuphela ukuze sithole induduzo, kodwa nezalo ukunyakaza ephephile. Iqiniso lokuthi injongo eyinhloko ukwehla kwentengo the yokubeka imoto - Damping ka oscillations zomzimba kusukela endleleni. Uma yokubeka uphumile emgqeni, bese imoto ayonyakaziswa, kuyoba umsindo vibration. Ake sibheke ukhetho ethandwa kakhulu ngesiRashiya - ukushaqeka "Kayaba" umthengi ukubuyekezwa kanye umbono uchwepheshe.
Okokuqala, kumelwe uqonde kancane nemigomo, njengoba kubalulekile eminye baqonde okushiwo. Into yokuqala ezibhekene abashayeli - kuyinto "ukushaqeka wokubacindezela" umqondo. Kodwa kumawebhusayithi ezisemthethweni imikhiqizo kangaka azilona neze abakhiqizi. Kufanele siqonde ukuthi kusho ukuthini ukuthi amafutha "yokubeka wokubacindezela."
Ngokufanayo, asikho okumsulwa igesi struts. Bonke zigcwele amafutha. Kodwa ngesikhathi esifanayo gazomaslyanye Racks ezibizayo, okuthembekile futhi iqine, njengoba kufakazelwa Izibuyekezo eziningi umthengi. Shock wezinciphisi "Kayaba", isibonelo, babe bobabili igesi namafutha, kuhlanganiswe kwi website esemthethweni ye umenzi. Kuyadingeka ukuba baqonde kabanzi ukwakhiwa sici ngasinye, futhi ngebuhle nebubi. Ngaphezu kwalokhu, sicabanga futhi kwamakhasimende ukubuyekezwa, okuyinto kithi kungaba umbandela lasemcoka eluhlolo izinga.
Le brand abaziwa umhlaba wonke Japanese onesikhundla ehamba phambili ukwenziwa imishini wokubacindezela emasimini shipbuilding, zezindiza kanye ubunjiniyela izimboni. inkampani Isekelwe ngo-1950. Ngokuhamba kweminyaka yokuba emakethe 57, inkampani usezuze nje Amazing eziphakeme. KYB - umphakeli ukushaqeka wezinciphisi izimoto esikhulu kunazo zonke emhlabeni. I isabelo eziphethe imakethe yomhlaba wonke - 24%, inhlangano lifaka lwesithathu esinazo ngokuhlinzeka Racks emakethe yesibili e-Europe.
indlunkulu KYB kuyinto eTokyo. Zonke izinkampani kuqashwe abantu mayelana 7,000. Umuntu kumelwe amane sicabange ukuthi imali yonyaka engaphezu kuka- $ 2.5 billion. Kulokhu, lo inzuzo kuyinto engaphezu kwengu-60% ukushaqeka wezinciphisi "Kayaba" Excel G. Izibuyekezo lokhu umkhiqizi ku-90% amacala omuhle. Lokhu akusona isimanga, ngoba inkampani Japanese - umholi wezwe supply Racks phezu elihambayo, okubonisa ukuthi imikhiqizo esezingeni lomhlaba.
Shock wezinciphisi "Kayaba": umthengi Izibuyekezo
Njengoba abashayeli, lapha kakhulu zephimbo wokubusa. KYB esungulwe ngokwabo njengoba sasivumela imikhiqizo eliphezulu ngokuphila isikhathi eside. Naphezu kweqiniso lokuthi ehhovisi ikhanda futhi imboni zitholakala eJapane, emakethe for secondary yokubeka izimoto ekhiqizwa eBrazil naseTurkey. Kodwa naphezu kwalokhu, mfutho ukushaqeka kuyinto ezingeni eliphezulu, okuyinto yaqinisekiswa abashayeli abavamile kanye nochwepheshe abanolwazi embonini.
Abaningi kanye ngokwabo okokuqala banquma ukuzama imikhiqizo brand KYB, kanti abanye baye belulekwa abangane. Kodwa noma kunjalo, abantu ashiye okubuyayo. Shock wezinciphisi "Kayaba" ukunconywa ngokubekezelelana intengo zabo ezingabizi futhi quality enhle. Mhlawumbe manje Japanese ukunikela okungcono value "intengo / izinga." Kukhona izinhlobo ezinikeza ukuma eziqine kakhudlwana, kodwa izindleko bayehluleka ngekwetimali, kwabaningi. KYB uyabanikeza iphayiphi of ezifana brand owaziwa kahle ngokuthi "Audi", "Volkswagen", "Toyota", "Mitsubishi" nabanye.
Gazomaslyanye ukushaqeka wezinciphisi nezici zabo
Ngenxa yalokho, le struts igesi awekho, lapho gazomaslyanye. Kodwa kubashayeli abaningi kuphela ihlaba umkhosi igesi, okusho gazomaslyanye, futhi, ngokufanelekile, wokubacindezela (uwoyela).
Ngokuqondene ukwakhiwa kwalesi strut igesi, kuba zonke ulula. Kukhona stem enamathiselwe ekupheleni piston yayo. Futhi kukhona amakhamera amabili, enye ikhona uwoyela, kanti eyesibili - wegazi ophezulu igesi. Umgomo we operation sedivayisi enjalo kanje. Lapho umthwalo ifika ku kwentonga, piston ngazo ku amafutha, okuyinto cishe hhayi onomfutho. Amafutha badabula amandla phezu kodonga ezithathekayo, ngemuva okuyinto kukhona igesi. Yena, ngaphansi umthwalo ezengeziwe onomfutho, ngaleyo ndlela ukuqinisekisa ukunyakaza abushelelezi induku. Lapho umthwalo kulahleka, igesi ebuyiselwa isikhundla yayo yasekuqaleni ngokududula induku phandle.
Ngebuhle nebubi wezinciphisi gazomaslyanyh
Izimfanelo lapha impela eningi. Okokuqala ngingathanda ukugqamisa ukuthi lezi Racks une-rigidity owengeziwe. Amasondo njalo ngokuqinile bezama komgwaqo, ngakho kokubili transverse kanye imiqulu longitudinal cishe lingekho. Ezemidlalo izimoto ngokuvamile zisebenzisa ncamashi lolu hlobo ukushaqeka wezinciphisi, okuyinto uqhosha futhi izinzuzo ezilandelayo:
Amafutha akusho ubilise, kusukela igesi uqobo kuthatha ingxenye ukushisa;
ahlinzeke izinga eliphezulu okulawula;
ukumelana imithwalo omkhulu.
Ngokuqondene nebubi ngalesosikhathi they are here:
isakhiwo eziyinkimbinkimbi kakhulu;
ezingeni lelisetulu rigidity;
ezingeni okuphansi wenduduzo kungakhathaliseki komzila womgwaqo;
Njengoba ngentengo, khona-ke kuyinto edidayo kakhulu umthengi ukubuyekezwa. Gazomaslyannye ukushaqeka wezinciphisi "Kayaba" ukuze "Lacetti" izindleko mayelana ruble 4,000 sisinye, futhi "Lanos" - mayelana 2500. Ngesikhathi esifanayo amafutha Analogue kubiza eshibhile 30%. Wonke umuntu yena kumelwe azinqumele ukuthi kubaluleke kakhulu - induduzo nokusingatha ngesivinini.
Amafutha ukushaqeka wezinciphisi "Kayaba": ukubuyekezwa kanye izici
Njengoba leli gama lisikisela ukuthi isikhala isilinda egcwele uwoyela, igesi lapho. Ezinye izindaba zika-ukwakhiwa cishe okufanayo. Kukhona induku nge piston kanye valve isheke. Esikhathini maqembu zokugcina uwoyela, okuyiwona wona has imbobo encane-ubukhulu.
Kuyaphawuleka ukuthi laba Racks kungukuthi yenzelwe ukusetshenziswa endleleni eliphansi ngendwangu. umthwalo njalo kuholela cavitation (bubble kumiswa) Eqinisweni, amafutha uqala ubilise. Ngenxa yalokho, kukhona izimbotshana futhi viscosity encishisiwe, amafutha siyodlula valve isheke. Ngenxa yalesi sizathu ezilula okusebenza edeskini akuyona yaphumelela kangaka. Kunciphisa umphumela cavitation iyunithi ukusebenza, uma ukhuluma nayo ngokuzibulala eziningi umthengi ukubuyekezwa. Amafutha wezinciphisi "Kayaba" nokho ejabulela Ukuthandwa kwezindlela ngenxa imikhiqizo kunalokho ezimangelengele ukwakhiwa, futhi uma babefisa, the yokubeka yalolu hlobo kungenziwa lilungiswe.
Lapho ushayela idolobha alikafiki up okudlula amafutha (wokubacindezela) ukushaqeka mfutho. Ngempela yenza imoto ukhululekile futhi kukalwa. Lokhu yokubeka iphuza ngisho izimbobo sina elincane ngakho umshayeli endleleni bokungafani ingabe akakuboni nokukubona. Ungaphinde ukhethe izinzuzo ezilandelayo:
maintainable design elula;
isisetshenziswa okusezingeni eliphezulu. KYB ngokuvamile uya amakhilomitha angaba yizinkulungwane 60 noma ngaphezulu .;
Ngokuqondene nemiphumela ethile engathandeki, bungokulandelayo:
Izimoto nge Racks enjalo ozosigingqela e emakhoneni;
ngesikhathi ushayela okuqhubekayo ngejubane emgwaqweni omubi zingavela cavitation umphumela;
udedele ukusebenza lapho umoya ungena isilinda.
Ngokuvamile, i-ukushayela elinganisiwe edolobheni noma namadlelo siyindlela esikhulu. Kodwa kanjani sporty ngeke kubhekwe ngaphansi kwanoma yiziphi izimo.
Njengoba abashayeli bathi lena olukhuni iningi yokubeka, engatholwa imali efanayo. Ngempela, ukuhlola kuye kwabonisa ukuthi at ngokulinganisela umthwalo yokubeka ukuhamba isikhathi eside ngokwanele. Ngisho naphezu kweqiniso lokuthi kufanele uyiswe wezinciphisi igesi ukushaqeka, awayona kanzima kakhulu. Ngokwesibonelo, i-Excel-G - the ekhethekile nethambile, negesi-a-nje - obuqinile, Ultra-SR - yakhelwe kuphela ukushayela sporty.
Ngaphambi kokuba uthenge kufanele nakanjani ukubheka umthengi ukubuyekezwa. Shock wezinciphisi "Kayaba" Excel-G ezibhekwa azibizi kakhulu, futhi ngokuvamile kakhulu isethelwe izimoto yasekhaya. Futhi, abashayeli ngokuvamile bathi lena segolide kusho. Khona-ke kukhona induduzo Ukugibela, futhi ezingeni ezanele rigidity ukuze iphatheke imoto enhle. Ngu ukuthenga oyingqayizivele kungenziwa Kunconywa, ikakhulukazi uma ucabangela intengo imali. Nakuba namanje ngezinye izikhathi kunezindlela Izibuyekezo ezingezinhle. Shock wezinciphisi "Kayaba" ngesikhathi umkhonyovu akubizi, ngakho yokubeka ngokuvamile counterfeited. Kungcono ukuthenga kusuka umdayisi.
"Kayaba Premium": Ingabe kuwufanele ukuthatha?
Uma uvakashele izinkundla thematic kuwebhu ke lo mugqa Kunconywa 100% wabasebenzisi. Nakuba kunezinkolo egameni amazwi anjengokuthi "premimum", kungcono pretty ephansi ekupheleni models, okuyinto efakwe izimoto kakhulu yasekhaya. On izimoto angaphandle bavame kakhulu ukubeka futhi ushiye okubuyayo. Shock wezinciphisi "Kayaba Premium" ukushintsha ngokuphelele nokuzwakala nokushayela imoto. Nakuba ancike rigidity lapha akudingekile, njengoba lesi sabelomali uwoyela imele. Ziyakwazi esivela kuzo zonke izifo yalolu hlobo ukushaqeka mfutho. Ngo frost elikhulu bona dubeyut, kodwa ukushisa - buthaka.
Njengoba kuphawulwe ngenhla, cishe ngo-100% abasebenzisi ushiye okubuyayo. Ezingemuva ukushaqeka wezinciphisi "Kayaba", isibonelo, ukuhamba amakhilomitha angaphezu kuka-60 000. Lokhu kuhle kakhulu kokucabangela izindleko. Per kusethelwe ku- "Chevrolet Lacetti" kuyodingeka bakhokhe ruble mayelana 9,000. Akukhona ezibizayo ikakhulukazi, kodwa uma acabangele umthombo, cishe khulula.
ngemali ephansi futhi izinga okusezingeni
Bheka, silapha kancane kuqondwe nalo brand Japanese KYB. Njengoba ubona, lokhu kuyinto nomkhiqizi uyakufanelekela kakhulu enikeza umkhiqizo izinga okusezingeni ngesikhathi intengo imali. Lokhu kuboniswa izibuyekezo eziningi. Shock wezinciphisi "Kayaba" ukuze "Niva" noma "Lacetti" kuyoba engabizi. Kungakhathaliseki uhlobo imoto, abashayeli wanelisekile, ngoba handling nenduduzo njalo ushintsha zibe ngcono.
Ukugibela nge Racks inoperable nje kuyingozi. Lokhu kungaholela yokuthi esikhathini esithile isondo ilahlekelwa traction, futhi kuyoba khona ukulahlekelwa ephelele control. Uma imali akuyona kakhulu, kufanele sinake sha-Japanese ukuthi ukhiqiza eliphezulu reception. Nokho, kumelwe baxwaye elinegazi, ngakho-oda arcade kwenziwa ngesikhathi umthengisi noma kwi website esemthethweni. Ukuze uthole lewaranti, udinga ukuthenga Racks 4 nje bese ufake nabo enkonzweni ezikhethekile.
"Kayaba" - a brand omhlaba, uye wathola ukunconywa ububanzi. Shock wezinciphisi lokhu umakhi okuhlala kakhulu futhi asezingeni elifanele, nakuba kukhona nalabo abashunyayezwa ehlatshwa kanzima kakhulu, noma umane ungathandi. Kodwa lena indaba yangasese, inzuzo zama-trade marks manje omningi, ngakho kukhona njalo nenala ukukhetha kusuka.